Kpọtụrụ n'ụlọ site na iji ngwa kacha mma maka ekwentị gị | Gam akporosis
Ngwaọrụ ekwentị kacha mma ị nwere na ekwentị gị
Nyere ahụkebe ihe ndị anyị na-enwe taa ruru ka coronavirus, teleworking na-nye iwu dị ka a mkpa n'ihi na ma ndị nkụzi ma ụlọ ọrụ. Site na Androidsis os anyị na-akwado ngwa kachasị mma iji nwee ike ịkwado n'ụlọ.
A usoro nke ngwa ọdịnala na nwere ụdị ya maka ekwentị mkpanaaka ma ha na-enye gị ohere ịgafe data niile, akwụkwọ, oyiyi na ndị ọzọ site na igwe ojii syncing. Anyị ga-eme ya na ngwa ndị a ga-abata n'aka ụbọchị ndị a nke ga-enye gị nku maka nkwukọrịta, nhazi na arụmọrụ nke ọrụ gị.
1 Ole na ole mbụ aro
4 Google mbanye
Ole na ole mbụ aro
Tupu ị gaa na ngwa ọrụ ekwentị niile, buru n'uche na ngwa ndị a dị n'okpuru nwere ike ịhazi onwe anyị na mkpa anyị. N'ezie m ga-ekwu maka Zapier na Ahụmahụ nke iso ha rụọ ọrụ kwa ụbọchị ijikọ aka na otu ndị m ji azụlite ọrụ m.
Ọ bụrụ na m kwuo isiokwu, ọ bụ n'ihi anyị nwere ike ịkwalite njikọta ha n'etiti ha ma melite arụmọrụ niile. Dị ka ha, ha nwere ọtụtụ narị mmekọrịta. Aga m akwado ka ị jiri oge nyocha, n'ihi na ị nwere ike ịchọta akụrụngwa nke ga - enyere gị aka ịchekwa oge ọrụ maka gị yana ndị otu ma ọ bụ klaasị ị na - arụ ọrụ.
Un ngwa ngwa. Are bụ onye nkuzi nke otu klaasị. Have nwere ebe nkata n'ime Slack na n'ime ya ụmụ akwụkwọ niile gbasara otu isiokwu. N'ime ụlọ nkata a, anaghị egbochi gị ịza ajụjụ na naanị ị nwere ike. N'ime ụlọ nkata a, ị nwere Slack jikọtara ọnụ, na oge ọ bụla nwa akwụkwọ sitere na Trello mepụtara kaadị na-egosi na ha arụchaala ọrụ, a na-ewepụta akwụkwọ na ime ụlọ ahụ dị na Slack. Akpaaka a bụ ihe atụ doro anya nke ihe enwere ike ịme.
Jiri ngwa ndị a iji mee ka ha kwekọọ na mkpa gị ma hụ ha dịka ihe nwere ike ịbụ hama ma ọ bụ tebụl iji nwee ike ịrụ ọrụ ahụ. Gaa maka ya.
Slack bụ ngwa de ikori maka ọkachamara na maka telework par kacha mma. Ngwa magburu onwe ya na ụdị nnwere onwe ya nke ejiri ịmepụta ebe ọrụ yana nke ọ bụla n'ime ha nhọrọ iji mepụta ebe nkata niile, yana ikikere ha dị mkpa, nke anyị chọrọ.
Otu n’ime ebumnuche ya anọwo dochie email. You ga-echekwa etu ọ ga - esi mee ya. Dị mfe: ozi ọ bụla ị zigara na ebe nkata nwere ike ịhụ onye ọ bụla nọ na ya. Naanị nwa akwụkwọ ma ọ bụ onye otu ahụ, mgbe ọ na-abanye na Slack, ga-enwe ike ịlele ozi niile enwetara, ndị akpọrọ ya na akara aka, ga-ahụ ya.
Ọ nwere nnukwu interface na adabara imewe maka taa. Anyị agaghị achọ ụdị akwụ ụgwọ ọ bụla n'oge ọ bụla, ebe ọ bụ na na mbipute n'efu anyị nwere ihe niile anyị chọrọ iji kpọtụrụ ndị ọrụ ọrụ ma ọ bụ klaasị otu isiokwu. Emojis iji kwado na anyị agụwo ozi onye nkụzi, okwu na-esochi onwe ya ịhapụ isiokwu nke isi ụlọ ahụ emetụtaghị ma si otú na-eme ka ihe offtopic ma ọ bụ gbanyụọ isiokwu, kpọmkwem kwuru banyere ndị òtù ma ọ bụ izugbe chat, na ikikere nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike na-ahụ ụfọdụ ụlọ. Nke ahụ bụ anyị nwere ike ịmepụta ụlọ maka ndị isi ọrụ na onye ozo maka ndi otu.
Ọzọ dị ukwuu omume ọma nke slack dị ka ngwa maka teleworking bụ ikike dị ukwuu maka ijikọ aka na ọrụ ndị ọzọ. Anyị nwere ike itinye Google Drive, Trello, Dropbox na ọtụtụ ndị ọzọ iji tinye ọrụ ọhụrụ.
Slack nwere nsụgharị weebụ, ngwa nke ya maka Windows 10, Mac, iOS na gam akporo ọ bụkwa ngwa kachasị mma maka nkwukọrịta telework maka otu, ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi na ndị ọkachamara.
Trello bụ nnukwu ọrụ mmekọrịta anyị nwere ike imeghari na mkpa anyị. Ihe e ji mara ya bụ a osisi na ndepụta nke ndepụta na ndepụta ọ bụla nwere usoro ndetu. Enwere ike ịmepụta ndị ọrụ iji kenye ụfọdụ bọọdụ ma nye ha ikikere maka ya ka onye ọ bụla nwee ike idezi kaadị ma ọ bụ gụọ ya.
Na ndetu ị nwere ike itinye onyonyo, mepụta votu, tinye listi ana-eme, bulite ụdị akwụkwọ niile, hazie ederede na akara akara (attentionaa ntị na nnukwu ngwa a maka ndetu nke ụdị a), gbakwunye ndị otu, hazie kaadị ọ bụla site na iji akara agba na ndị niile na-edepụta, mado na nhọrọ ndị ọzọ.
Site na Trello blog anyi nwere ịnweta ọtụtụ ndebiri site na njikọ a maka kọmpụta kọwaa na ịchekwa oge. Na iji nye gị akụkụ Trello, attentionaa ntị na ndepụta nke ndebiri site na otu: azụmahịa, imewe, agụmakwụkwọ, injinia, ịre ahịa, ndị ọrụ ebere, ọrụ ndị ọzọ, nrụpụta, njikwa ọrụ, njikwa ngwaahịa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Trello bụ ngwa ọrụ anyị nwere ike ịhazi dịka anyị chọrọ. Ihe atụ nke ndebiri Trello maka agụmakwụkwọ na igosipụta oke nhazi nke usoro a: ị na-eme otu bọọdụ maka klaasị ọ bụla, ndepụta nke ọ bụla bụ izu nke ọkara agụmakwụkwọ na klaasị ọ bụla bụ ihe ndị dị mkpa ịme na klaasị (ịbụ onye nkuzi) maka izu.
Dị ka Slack, Trello nwere Add Ons iji jikọta ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ anyị nwere ike iwekota ya na Slack. Anyị na-ewere kaadị ma kesaa ya na nkata na Slack ma site na slack chat niile ndị otu pịa "nabata" iji lelee kaadị ahụ. Mana anyị nwere ike ijikọ Dropbox ma ọ bụ Google Drive wee si na kaadị ndị ahụ gaa n'igwe ojii nke nyiwe abụọ a.
Ihe niile Mekọrịta na igwe ojii site na mkpanaka gị na gam akporo ma ọ bụ iOS, mbipute weebụ ma ọ bụ ngwa dị iche iche maka Windows 10 na Mac. Ọzọ nke ngwa ndị dị mkpa maka ịrụ ọrụ ekwentị na mgbe ị chọpụtara ya, ị gaghị ebi ọzọ na-enweghị ya.
Anyị nwere ike itinye Dropbox, nnukwu ọrụ nchekwa igwe ojii ọzọ, mana Google Drive nwere nnukwu atụmatụ: ọ na-ejikọ ọfụma na ngwa ọfịs dịka Google Docs, Sheets, na Google Presentations. Nke ahụ bụ Google Drive bụ ezigbo ngwa maka ịkwado ịkekọrịta PDFs ma ọ bụ faịlụ buru ibu ekele maka nhazi ya.
Ewezuga inwe ike bulite faịlụ niile ma ọ bụ kesaa folda ka otu ndị ọrụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ wee nwee ike ịnweta ya, kwa na-ejikọ na ngwa abụọ ọrụ telivishọn ndị ọzọ kwuru. N'ezie, anyị nwere ike ịme akwụkwọ niile ebugoro na ebe nkata Slack na-echekwa (mana anyị nwere ike iji nke a mee nke a)
Dị ka ndị ọzọ, na n'ihi na Android sitere na Google, anyị nwere nsụgharị maka sistemụ arụmọrụ niile, nsụgharị weebụ na Windows 10. Ike ya dị ukwuu kekọrịta ederede ma ọ bụ jikọọ aka na dọkụmentị, ọ na-enye anyị ohere ịchekwa ntinye nke ngwa ndị a raara nye ndetu. Ihe ị ga-ekwu banyere nhọrọ gị ka ị na-enyocha akwụkwọ ma bulite ha ozugbo ị were igwefoto igwefoto were foto.
Anyị anaghị eche ihu ngwa maka gam akporo gam akporo, mana anyị na-eme ya Ọ bụ ọrụ ga-enyere anyị aka ijikọ ọtụtụ ngwa, nyiwe na ntanetị n'ịntanetị maka ịrụ ọrụ igwe, ma si otú a rụọ ọrụ ha. Maka n'efu na Zapier anyị nwere ike ịmepụta "Zaps" maka ụfọdụ ọrụ anyị ga-"programmụ" n'ụzọ dị mfe.
Ihe omuma di nfe, anyi nwere ike ijikọ Slack na Trello nke mere na oge obula edere akara na kpakpando na nkata Slack, a na-emepụta kaadị ọhụrụ na ndepụta nke bọọdụ ahọpụtara. Ma ọ bụ naanị nwee ọkwa emere na Slack oge ọ bụla e mepụtara kaadị na ndepụta ụfọdụ.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị etinye ikpe ahụ na anyị nọ na otu nkata ma ọ bụ nkata klaasị, n'oge ahụ onye oru ngo ma obu onye nkuzi ga emeputa kaadi na trello Site n'omume dị otú ahụ iji rụọ ma ọ bụ rụọ n'ụlọ, a ga-ewepụta akwụkwọ na akpaghị aka na nkata ahụ.
Zapier na-enye anyị ohere ijikọ ọtụtụ puku ngwa na ọrụ anyị ga-achọrịrị ndị ahụ ka ha hụ njikọ ha nwere. Mmemme ọ dị mfe ma n'efu anyị nwere 5 zaps na mmelite nkeji 15 maka mmekọrịta. A fabulous ngwọta ka iwekota ndị niile teleworking ngwa.
N'ime ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ dijitalụ dijitalụ, Mbugharị na-aghọ usoro ikpo okwu nke kacha mma maka nzukọ vidiyo. A oké ngwa maka teleworking otú anyị pụrụ ịhụ "ihu anyị". Ma ị nwere ike iche na anyị nwere ndị ọzọ dịka Skype ma ọ bụ Hangouts, mana anyị nọrọ na mbugharị maka ọtụtụ ebumnuche.
Ọ na-enye nnukwu egosipụta mgbe ọ bịara na nkwukọrịta, ebe ọ bụ site na njikọ anyị nwere ike ijikọ ma site na mbipute ya web dị ka site na ngwa gị maka gam akporo ma ọ bụ Windows. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee nnukwu nkwanye ogo; n'ezie Anyị ekwuola banyere ya maka ọnwa dị ka nnukwu ihe ngwọta.
Na dika, na-ejikọta na Zapier ya mere, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta nzukọ Mbugharị site na mmemme kalenda ọhụrụ ma ọ bụ nata ọkwa mgbe enwere nzukọ ọhụụ site na Mbugharị.
Ndị a bụ onye nke kasị mma ngwa ọdịnala n'ihi teleworking ma nke ahụ ga-enye gị ohere ijikọ n’ụzọ zuru oke n’ụbọchị ndị a ka a ga-amanye ọtụtụ ka ha rụọ ọrụ ha site n’ụlọ ha. A coronavirus nke mere ka anyị rute ebe a, mana ọ dabara nke ọma na anyị nwere ngwaọrụ pụrụ iche iji kwurịta okwu, rụkọta ọrụ ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ịmụ akwụkwọ na-enweghị nsogbu ọ bụla
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ekwentị kacha mma ị nwere na ekwentị gị
Eri´s Forest bụ ụlọ elu nke jupụtara na anwansi arboreal
Mmelite na gam akporo 10 nke Xiaomi Mi A2 Lite na-enye ụfọdụ ngwaọrụ enweghị ike ịrụ ọrụ